नेपाली बोल्ने अफ्रिʼकन युवतीः नेपाʼलीसँग बिहे गर्छु भन्दै केपी ओलीलाई यसो भनिन् (भिʼडियो सहित) – Ap Nepal
विदेशीले नेपाली बालिदिं’दा हामीलाई निकै नै खुशी लाग्छ । नेपाली बोल्ने र नेपाललाई मन पराए’र माया गर्ने धेरै विदेशीहरु छन् नेपालमा । तीनै मध्य’की एक हुन् विउन्सी पनि । उनी अफ्रिकन हुन् ।
लकडाउनको समयमा नेपालमै थुनिएकी वि’उन्सीले राम्ररी नेपाली बोल्न जन्दछिन् । नेपा’ली बोल्ने मात्र नभई उनले नेपाली लोक गीतहरुपनि उत्तिकै राम्रो लय र भाका’मा गाउन जान्दछिन् । उनको बोली र गीतले सबैलाई आर्कषित गदर्छ ।
लक’डानका कारण आफ्नो देश फर्कन नपाएकी विउन्सी’लाई नेपालको मायाले तानेको उनी बता’उँछिन् । उनी भन्छिन्,‘लकडाउनको स’मयमा म यता बस्न बाध्य भएँ । र यही लकडा’उनकै समयले मलाई नेपाल र नेपालीप्र’तिको मायामा अलझायो ।
मलाई नेपा’लीसंगै बिहे गर्न मन छ । मलाई नेपाली खाना मन पनि पर्छ ।’ नेपाल र नेपाली प्रतिको प्रेमलाई ब’ताउँदै विउन्सीले आफुलाई मन पर्ने लोक गीत पनि गाएर सुनाईन् । उनी नेपाली लोक गीत निकै नै राम्रो’संग गाउने रहेछिन् ।
विउन्सी’ले एउटा नेपाली फिल्म’कोलागी गीत पनि गाई सकेकी छन् । उनले द्धन्द्ध निर्देशक राजेन्द्र खडकीको फिल्म’कोलागी एउटा गीत गाएकी छन् । विउन्सी’ले नेपालका धेरै कुरा सिकी सकेकी छन् । विशेषगरी उनले नेपाली सबै प्रकारको संस्कृतिहरुलाई रुचाएको बताउँछिन् ।
विउन्सी’ले नेपालको राजनीतिलाई पनि नियालेको बता’उँदै उनले हाल नेपालको प्रधानमन्त्री केपी ओली भएको पनि बताईन् । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओली’को नाम स्पष्ट रुपमा उच्चा’रण समेत गरिन् । – इताजा खबरबाट
Prevनेपा’लमै रिक्सा चलाएर अʼपांग श्रीमान पालेर छोरीलाई इन्जिनियर पʼढाउदै महान चे’लीको संघर्षको कथा !
Nextसिधाकुरा जनतासँगको दोʼस्रो भागमा सम्झनाको दमʼदार प्रस्तुति -हेर्नुहोस (भिडियो सहित) !
अभिनेत्री काजलले ग’र्भावस्थामा महिलाहरूलाई ला’जमर्दो प्रतिकृया दिनेहरुलाई दिइन् गतिलो जवाफ
सक्किगोनी आज प्रसारित २२ औं भाग यस्तो छ -हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)